WARBIXIN: Chelsea Oo Premier League Ku Guuleysan Karta Maarso & Afar Waxyaabood Oo Laga Bartay Kulankii Maanta Ee Stamford Bridge. - Wargane News
Home Sports WARBIXIN: Chelsea Oo Premier League Ku Guuleysan Karta Maarso & Afar Waxyaabood...
WARBIXIN: Chelsea Oo Premier League Ku Guuleysan Karta Maarso & Afar Waxyaabood Oo Laga Bartay Kulankii Maanta Ee Stamford Bridge.
1. Chelsea horyaalkaan waxa ay jeebka ku ridan doontaa bisha Maarso
Chelsea waxa ay ciyaarta ku dhameysatay iyagoo 12 dhibcood oo nadiif ah ku haya hogaanka, inkastoo guushii Tottenham ay gaartay ay ka dhigeyso inay haatan sagaal dhibcood ku hayaan. Kulankii Stamford Bridge waxa ay soo bandhigeen qaab ciyaareed cajiib ah, ciyaar dishibiliin leh, waxaana ay u dagaalameen guusha.
Chelsea wado dheer ayay u jirtaa kooxaha kale, waxa ay dusha ka heystaan Premier League, waxaana uu tababare Antonio Conte uu taatiko ahaan ka badiyay tababarayaasha kooxaha kale.
Chelsea wacdarro ayay dhigeysay xilli ciyaareedkan. Waxa ay u qalmaan inay noqdaan kooxda horyaalka hanata, waxaana ay gacanta ku dhigi doonaan waqti ka horeeya xilligii la filayay in horyaalka lagu kala bixi doono.
2. Ma jeclaaneysid Eden Hazard marka uu careysan yahay
Shkodran Mustafi ayaa qalad xun ku galay Eden Hazard qeybtii koowaad. Waagii horre Hazard wuu muuqbeeli jiray marka awood loo sheegto.
Laakiin waqtigaan sida Hulk oo kale waxa uu tusay Arsenal inaysan jeclaan doonin marka uu careysan yahay.
Hazard waxa uu ahaa mid mucjiso ah. Farsamadiisa iyo soo bandhigistiisa ciyaareed ayaa qabsatay garoonka. Waxa ay u isticmaali kareen hal kubad Hazard inta kalena kubad kale.
Laakiin goolkii Hazard oo ahaa mid uu si cajiib ah isaga keligiis ugu dadaalay waa mid ka mid ah goolasha ugu fiican xilli ciyaareedkan haddiiba uusan aheyn kan ugu fiican. Gool cajiib ah uu dhaliyay ciyaaryahan cajiib ah.
3. Arsenal waa laga badiyay laakiin waa ay tartantay
Waa mid in laga badiyo oo lagu ceebeeyo. Waa mid kale inaad tartanto oo lagaa badiyo. Qeybtii 1aad cajiib ayay aheyd oo cagta ayaa cagta la isku saaray iyadoo Arsenal ay heli kartay goolka barbaraha.
Waxa ay soo bandhigeen inay ciyaarta ku jiraan. Taageerayaashii soo safray waxa ay soo bandhigeen inay kooxdooda la jiraan xitaa ka dib markii uu Eden Hazard goolkii cajiibka ahaa ka dhaliyay.
Arsenal waxa ay soo bandhigtay sharafteeda, kubad xamaasadeysa xitaa haddii uu horyaalka gacantooda ka baxay, waxaana ay aakhirkii heleen gool sabarsiin ah uu u dhaliyay Olivier Giroud.
4. Lama sugi karo in la hergeliyo teknooloojiyada muuqaalka
Goolkii furitaanka ee Marcos Alonso waxa ay aheyd in la diido madaama uu gacantiisa iska horumariyay islamarkaana uu xusul ku duftay Hector Bellerin ka hor inta uusan goolka dhalinin.
Laakiin markii ugu horeysay ee la arkayay waxa ay u muuqatay inaysan qalad aheyn. Kaliya ku celiskii la daawaday waqtigii nasashada ayaa si fiican loo arkay inuu qalad dhacay.
Waana sababta loogu baahan yahay teknooloojiyada muuqaalka si ay u caawiso garsoorayaasha.